आज मिति २०७६, फाल्गुन ५ गते सोमबार को दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित) – Nepali news portal
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०८:३७ February 21, 2020 काठमाडौं डेष्क
मेष : यदि सम्भव छ भने लामो यात्रा गर्नबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस् किनभने तपाईं यात्रा गर्न निकै कमजोर हुनुहुन्छ र यसले तपाईंलाई अझै कमजोर पनि बनाउँछ। आफ्नो घरमा समन्वय ल्याउन एकत्रित भएर काम गर्नुहोस्। तपाईंले आज प्रेमको मीठो चकलेटको स्वाद प्राप्त गर्नु हुनेछ। कामका कुराहरू तपाईंको पक्षमा हुने देखिन्छन्। आज, आफ्नो जोडीले तपाईंलाई प्रेम र चेतनाको एउटा अर्कै दुनियाँमा लिएर जान सक्छ।
वृष : तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। साना बच्चाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछन् र आनन्दित गराउनेछन्। रोमान्सको रोमाञ्चक दिन – साँझको लागि केहि विशेष योजना बनाउनुहोस् र त्यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले सधैं नै गर्न चाहेको काम आज कार्यालयमा गर्न पाउन सक्नु हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ।
मिथुन : तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। नयाँ सम्बन्ध दीर्घकालिन र अत्यधिक लाभदायक हुनेछ। आज तपाईंले आफ्ना साथीको अनुपस्थितिमा उनको खुशबू महसुस गर्नु हुनेछ। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। आज तपाईंले वैवाहिक जीवनको परमानन्द स्वीकार गर्ने प्रशस्त अवसर पाउनु हुनेछ।
कर्कट : तपाईं आफ्नो सोखको लागि वा तपाईंलाई सबैभन्दा आनन्द लाग्ने कुरा गर्न आफ्नो अतिरिक्त समय खर्च गर्नुपर्छ। दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ। प्रियको बिना तपाईंको समय बित्न गाह्रो पर्नेछ। कुनै पनि संयुक्त उद्यममा प्रवेश नगर्नुहोस् – किनकि साझेदारहरूले तपाईंको फाइदा लिने प्रयास गर्नेछन्। तपाईंलाई सबैभन्दा गर्न मन लाग्ने कुराहरूको सामाजिकरण र पालनको लागि आज समय छ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको व्यञ्जनहरुको प्रलोभन् वा अंगालो जस्ता साना मागहरूको बेवास्ता गर्नुभयो भने उनी दुखी हुन सक्नु हुनेछ।
सिंह : शारीरिक वास्तविकता हेर्ने इच्छा भएमा तपाईंले आफ्नो विचार र ऊर्जा बाँट्नुहोस्। मात्र अन्दाजले कुनै कुरो हुँदैन। तपाईंसँग अहिलोसम्म भएको समस्या के हो भने तपाईंले प्रयास नगरेर मात्र इच्छा गर्नुहुन्छ। आफ्नो मनबाट समस्याहरूलाई निकाल्नुहोस् र घर र मित्रहरू बीच आफ्नो स्थिति सुधार गर्न ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईंका साझेदारहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार काम गरेनन् भने आहत हुनु आवश्यक छैन – तपाईंले तिनीहरूसँग त्यस विषयमा राम्रोसँग कुरा गर्नु आवश्यक छ। आफ्नो जन्मदिन बिर्सेको वा केही अन्य कुरा बिर्सेको जस्ता साधारण कुरामा आफ्नो जोडीसित पुरानो मुद्दामा आज तपाईं भिड्न सक्नु हुन्छ। तर, सबै कुरा दिनको अन्तमा ठीक हुनेछ।
कन्या : प्रकृतिले तपाईंलाई उल्लेखनीय विश्वास र बुद्धि प्रदान गरेको छ – त्यसैले यसको उत्तम प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले मित्रहरूबाट सहयोग पाउनुहुनेछ – तर सावधानीसँग बोल्नुहोस्। यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन थोरै प्रेम र दया दिनुहोस्। प्रमुख व्यापार सम्झौतामा बातचीत गर्दा आफ्नो भावना नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
तुला : तपाईंको हडबडे व्यवहारले पत्नीसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। केहि पनि मुर्ख्याईंपूर्ण काम गर्नु अघि आफ्नो व्यवहारको प्रतिक्रिया सोच्नुहोस्। यदि सम्भव हुन्छ भने आफ्नो मुड परिवर्तन गर्न टाढा जानुहोस्। मानिसहरूले तपाईंलाई नयाँ आशा र सपना दिनेछन् – तर धेरैजसो तपाईंको आफ्नै प्रयासमा निर्भर गर्नेछ। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध जादुले भरिएको हुनेछ; मात्रै यसलाई महसुस गर्नुहोस्। कुनै पनि नयाँ संयुक्त उद्यम र साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्नबाट बच्नुहोस्। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। राम्रो खाना र रोमान्टिक क्षण; सबै आज तपाईंलाई प्राप्त हुनेछन्।
वृश्चिक : प्रकृतिले तपाईंलाई उल्लेखनीय विश्वास र बुद्धि प्रदान गरेको छ – त्यसैले यसको उत्तम प्रयोग गर्नुहोस्। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। तपाईंको लापरवाही मनोवृत्तिले आमाबाबुको चिन्ता बढ्नेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्नु अघि उनीहरूलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ। तपाईं प्रेममा बिस्तारै तर निरंतर जल्नु हुनेछ। तपाईं कार्यालयमा आज गरिरहेको कामले भविष्यमा विभिन्न तरिकामा तपाईंलाई लाभ हुनेछ। तपाईंले आफ्नो जोडीबाट कम ध्यान दिइएको महसुस गर्न सक्नु हुनेछ, तर दिनको अन्तमा उनी तपाईंको लागि नै व्यवस्था गर्न व्यस्त थिए भन्ने बुझ्नु हुनेछ।
धनु : तपाईंको ऊर्जा स्तर उच्च हुनेछ र रोकिएका कार्यहरू पूरा गर्न यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। आफ्नो क्यारियरको योजनामा भन्दा बाहिरी गतिविधिहरुमा धेरै समय नष्ट गरेर बच्चाहरुले केही निराश बनाउँछन्। आज आफ्नो प्रेमीलाई केही भावनात्मक कुरा नभन्नु होला। तपाईंले सीधा जवाफ दिनुभएन भने तपाईंका साथीहरू नाराज हुने सम्भावना छ। आज तपाईंले गरेको स्वयंसेवक कार्यले तपाईंले सहयोग गर्नहरूलाई मात्र नभएर तर तपाईंले थप आफैलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न पनि मद्दत गर्नेछ। तपाईंको कार्य व्यस्तताको कारणले तपाईंको जोडीले तपाईंको इमानदारी प्रति शङ्का गर्न सक्छ, तर दिनको अन्त्यमा उनले कुरा बुझेर तपाईंले अंगाल्ने छन्।
मकर : रचनात्मक कार्यले तपाईंलाई तनाउमुक्त राख्नेछ। पुरानो सम्पर्क र सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने राम्रो दिन। प्रेमी जीवन आज सुन्दर रूपमा साँच्चै फूल्नेछ। आफ्नो विश्वासले तपाईंको व्यावसायिक जीवनलाई सुदृढ बनाउनेछ। यसले अरूलाई आफ्नो मत राखेर विश्वस्त गर्न र उनको सहायता लिन सक्षम गराउनेछ। तपाईंले आज आफ्नो जीवनसाथीलाई अझै मायालु बनेको पाउनुहुनेछ।
कुम्भ : मानसिक शान्तिको लागि केही दान र पुण्यको काममा आफूलाई समावेश गर्नुहोस्। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। रिस छोटो-पागलपन हो र यसले तपाईंलाई ……… गराउन सक्छ भनेर तपाईंले जान्नु पर्ने समय हो तपाईंले आफ्नो प्रेमीको एउटा नयाँ अद्भुत पक्ष देख्न पाउनु हुनेछ। कार्यस्थलमा दक्षता सुधार गर्न आफ्नो कौशल स्तरको सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको सञ्चार कौशल प्रभावशाली हुनेछ। विवाहित जोडीहरू सँगै बस्छन्, तर यो सधैं रोमान्टिक हुँदैन। त्यसैले आज साँच्चै रोमान्टिक हुन गइरहेको छ।
मीन : निराशावादी मनोवृत्तिबाट बच्नुपर्छ किनभने यसले तपाईंका सम्भावनाहरूलाई कम मात्र गर्दैन, शरीरको सामंजस्यमा पनि बाधा गर्नेछ। जोडी र छोराछोरीहरूले अतिरिक्त स्नेह र हेरविचार गर्नेछन्। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। तपाईं विदेशी जागिरको लागि आवेदन गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – आज राम्रो दिन जस्तो देखिन्छ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीको मायाम जीवनका सबै कठिनाइहरू बिर्सिनु हुनेछ।